Kuongorora Zvishandiso - Shandong QILU Maindasitiri & Kutengesa Co, Ltd.
Yakadzika Groove Bhora Kutakura
Tine kifaa chemberi uye kuongorora kwakaperera kunoreva kuita kuyedza uye kuve nechokwadi chedu zvigadzirwa zvigadzirwa, senge hombe dhijitari yakanangana-kuverenga spectrometer, chikanganiso detector, nitrogen uye hydroxide analyzer, muchina wekuyedza muchina, -60, yakaderera tembiricha inokanganisa yekuyedza muchina, Zeiss maikorosikopu uye nezvimwe zvishandiso zvinopfuura zana zana seti. Mimwe michina iri seinotevera:
* Carbon / Sarufa Yekuongorora
ELTRA's CS-2000 ndiyo yega muongorori pamusika wekumisikidzwa kwekabhoni nesarufa mune zvakasikwa pamwe nezvisingaenzaniswi sampuro. Nechinangwa ichi, iyo CS-2000 yakashongedzerwa nezvose zviri zviviri induction uye yekudzivirira tira inovhara yakazara yakazara huwandu hwekabhoni nesarufa kuongorora. Iyo CS-2000 inowanikwa neanosvika mana akazvimirira infrared maseru, ayo anotendera iwo chaiwo uye panguva imwe chete ongororo yepamusoro uye yakadzika kabhoni uye / kana sarufa yekuisa. Iko kunzwisisika kwemasero kunogona kugadziridzwa zvakasiyana nekusarudza kureba kweiyo IR-nzira yekuona yakanakisa yekuyera renji pane yega yega application.
* Dambudziko Kuedzwa
Kuoma kunoyera kuramba kwesampuli kune deformation yezvinhu nekuda kwekugara uchimanikidza mutoro kubva kuchinhu chakapinza. Iwo bvunzo anoshanda pane yakakosha fungidziro yekuyera iyo yakakosha zviyero zveiyo induction yakasara neiyo yakanyanya kuyerwa uye yakatakura indenter. Tiri kuyera kuomarara paRockwell, Vickers & Brinell zviyero.
* Tensile Bvunzo
Tensile Bvunzo umo sampuro inoiswa pasi peyakagadziriswa tension kusvika kukundikana. Mhedzisiro kubva kuyedzo inowanzo shandiswa kusarudza chinyorwa chechikumbiro, chekutonga kwemhando yepamusoro, uye kufanotaura kuti chinyorwa chichaita sei pasi pemamwe marudzi emauto. Izvo zvivakwa zvinoyerwa zvakananga kuburikidza neyakaomeswa bvunzo ndezvekupedzisira tensile simba, yakanyanya kureba uye kudzikira munzvimbo.
* Impact Bvunzo
Chinangwa chekuyedza kukanganisa kuyera kugona kwechinhu kuramba kurodha-kwakawanda. Inowanzo fungidzirwa maererano nezvezvinhu zviviri zvichirovana zvinomhanya zvakanyanya. Chikamu kana kugona kwemidziyo yekudzivisa kukanganisa kazhinji ndechimwe chezvinhu zvinotarisisa muhupenyu hwebasa rechimwe chikamu, kana mukukodzera kwechinhu chakasarudzika chechimwe chishandiso. Impact kuyedza kunowanzo kuve neCharpy uye IZOD Sisitimu yekumisikidza.
* Spectro Bvunzo
Tiri kuita spectro bvunzo pane yakasvibirira zvinhu kupisa, yakawanda yakakwenenzverwa uye kupisa kurapwa mune imwechete batch kuratidza kuti chigadzirwa chakagadzirwa chiri mukuenderana neyakajekeswa makemikari akaumbwa.
* UT Bvunzo
Ultrasonic kuyedza (UT) ndeye mhuri yeasina-anoparadza maitiro ekuyedza anoenderana nekupararira kwema ultrasonic mafungu mune chinhu kana zvinhu zvakaedzwa. Mune zvakajairika UT mashandisirwo, akapfupika ultrasonic kupomba-mafungu ane epakati masaiti anotangira pa0-15-15 MHz, uye dzimwe nguva anosvika makumi mashanu eMHz, anotapurirwa muzvinhu kuti aone kukanganisa kwemukati kana kuratidza zvinhu. Muenzaniso wakajairika kuyerwa kweiyo ultrasonic ukobvu, iyo inoedza ukobvu hwechinhu chekuyedza, semuenzaniso, kuongorora pombi basa ngura.
Maitiro Ekuchenesa Ngura Kunze kweCarbon Simbi
Carbon simbi ine mafomu mazhinji. Sechinhu chakasimba chinoshandiswa mukuvakwa kwezvivakwa, maturusi, mota nemidziyo. Carbon simbi inokombamira kuita ngura, saka mune dzakawanda kesi simbi ine ngura-chiratidzo laye ...
© Copyright - 2017: All Rights Reserved. - Simba neGlobalso.com